Mari yekudzidzira makirasi e-commerce | ECommerce nhau
Mari yekudzidzira makirasi e-commerce
Ehezve, mari yekutengesa zvemagetsi inoda chiteshi kunze kweicho chevanhu. Kuburikidza nhevedzano yezvigadzirwa kana mitsara yechikwereti iyo inoteerera zvaunoda iwe pachako. Iko imwe yeakanyanya kukosha ndeye iyo liquidity kuita zvivakwa zvayo kana kungo gadzira zvishoma nezvishoma uye kumeso kumeso mudhijitari.
Mukati meaya makiredhiti mitsara pane zvigadzirwa zvakatarwa sekufeketa uye kusvika padiki kurendesa kunogona kunge kuri panguva ino. Kufukidza chikamu chakanaka chezvinangwa zvinochengeterwa pamhepo kana mabhizinesi. Kuburikidza ne chikamu chemubereko izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya kune zvaunofarira. Nemusiyano wezvishoma zvegumi muzana zvine chekuita nechipo chinopihwa nemasangano emari kune vanhu.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti izvo zvinodikanwa nekirasi ino yemakambani zvakasiyana nezvakaitwa zvechivanhu kana zvakajairika mabhizinesi. Nekuda mari inosiyana neiyi uye nekudaro neimwe nzira yekurapwa nemasangano emari. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei tichizopa makirasi emari ekutengesa zvemagetsi kubva ikozvino. Dzakawanda uye dzakasiyana, sezvamuchaona muchinyorwa chino.
1 Mhando dzekubhadhara mari: kuisa chokwadi
2 Kurendesa nekuchinjika kukuru
3 Bhizimusi dhisikaundi uye kufambira mberi
4 Kufukidza njodzi mukushanda
5 ICO mitsara yemari
6 Kiredhiti mu online fomati
Mhando dzekubhadhara mari: kuisa chokwadi
Icho chigadzirwa chakagadzirirwa kune chero muzvinabhizimusi kana nyanzvi uye, kunyanya, makambani madiki nepakati nepakati ayo, ane fomula iyi, anogona rkuderedza basa wedhipatimendi rekutungamira, inotsvaga iyo accounting inogadzirwa nekutengesa uye kuunganidzwa kwayo. Zvakare nekufambira mberi pazuva rakakodzera rekubhadharwa kwemavovhoisi, izvi zvese zvichavandudza purofiti, kugona kwechikwereti uye solvency yemari yekambani.
Pakati pezvakanakira kubvumirana nechigadzirwa ichi pane ruzivo rwenguva nenguva, rwakajairika uye rwakagadziridzwa rwevakakwereta, kudzikiswa kwemitoro yekutonga kana kurerutsa kuverenga account yevatengi, pakati pevamwe. Kune rimwe divi, hapana chimiro chakatsanangurwa chemakambani anoshandisa ichi chigadzirwa chemari, zvirinani kuti kukamurwa kunopihwa nechigadzirwa chakatengeswa uye nemamiriro ekubhadhara.
Mune maonero eSpanish Association ye Factoring "Iko hakuna kutsanangurwa chimiro chevashandisi makambani echigadzirwa ichi, asi iyo miganho inopihwa nechigadzirwa chakatengeswa uye nemamiriro ekubhadhara. Mune mamwe mazwi, makambani ese anogona kuve vashandisi veFactoring, vachitengesa mumusika wepamusha kana kutengesa kunze kwenyika ”.
Kurendesa nekuchinjika kukuru
Izwi rekuti kurenda rakafanana ne kureba kwenguva refu kwepfuma, mune ino mota, chero inogadzirwa, modhi kana chidimbu. Kubudikidza nekuhaya, kambani (iyo yekambani yekubhadhara) inotenga mota nyowani, zvinoenderana nezvinodiwa uye zvinodiwa nemutengi wayo kana muenzi, uye inoita kuti iwanikwe kwavari.
Kunyangwe isiri chigadzirwa chakabatanidzwa zvakanyanya nezvinodiwa zvechitoro chepamhepo kana zvekutengesa, zvinogona kubatsira zvakanyanya pane imwe nguva muhupenyu hwekambani iyoyo. Pakati pezvakanaka kwazvo, chokwadi chekuti rendi inogona kuitwa nemhando dzese dzevanhu vepanyama uye vepamutemo pasina kurambidzwa zvinomira uye zvinomiririra sevhisi yakazara inobata zvese zvine chekuita nekushandiswa kwepfuma yainokanganisa.
Iyi inzira yakasarudzika yemari inogona kubatsira zvido zvevaridzi vechitoro chepamhepo kana bhizinesi pane imwe nguva kana imwe. Nekuti inopa yakanyanya kukwikwidza chimbadzo chiyero kupfuura mamwe ese makiredhiti anotenderwa kune yakasarudzika kirasi yemakambani. Iine amortization iyo inoratidzirwa nekushanduka kwayo kukuru uye iyo inogadziridzwa kune zvinodikanwa zvemakambani edhijitari.
Bhizimusi dhisikaundi uye kufambira mberi
Icho basa iro kufambisa mari kubhadhara zvikwereti (mabhiri, zvipikiso uye mareti) uye zvikwereti zvekutengesa, online uye nenjodzi yakakosheswa. Ndokunge, vanofungidzira mari yaunoda mushure mekubvisa iyo kufarira kwetemu uye nemitero inoenderana. Kune izvo, kana kukura kwakusvika, zvikwereti zvikwereti zviri kutarisira manejimendi manejimendi.
Chimwe chezvigadzirwa zvinowanikwa kuzvitoro kana mabhizimusi epamhepo ndizvo zvinonzi marezenisi emari. Iko kana iko kuunganidzwa kwemarisiti chiri chinogara chiri chebhizimusi rako, zvikwereti zvikwereti zviri kutarisira kupa nzira yakanakisa yekuzvibata kuburikidza nebasa ravo repamhepo kumakambani. ZveCRongedza mari yako yaunotumira zviri nyore kuburikidza nesoftware, pamwe nekupinza mari yako yaunotumira kana iwe uchitova nazvo muyakajairwa AEB fomati.
Iwe unogona zvakare rtrack Return; Ruzivo runotumirwa kwauri zuva nezuva. Ivo zvakare vanokupa iwe ma switch uye remittance jenareta ane akajairwa mafomati kuitira kuti kambani yako isashande nemamwe mafaira.
Kufukidza njodzi mukushanda
Kushambadzira pamusika kunogara kuri nenjodzi kune avo vanovatambura uye kana iwe ukatarisana nenjodzi iyi hauzombodzikama. Saka unogona kuenderera neako kusiyanisa mari Nenzira ine njodzi zvishoma, tinoratidza kuti mumabhangi ese mune zvigadzirwa zvemakatalog zvakasiyana, zvichienderana nerudzi rwevatengi, senge huwandu hwezvibereko, hunochengetedza maringe nemubhadharo unokwira munzira mbiri.
MAXIMUM INTEREST RATE OPTION (CAP) yevanhu venyama uye vepamutemo. Iyo inodzivirira kubva pamubhadharo wekukwira unokwira pamusoro pechiyero chakatarwa pakutanga pakutanga kwenguva yakatarwa, mukutsinhana nemubhadharo. Munguva yega yega, kana chimbadzo chiri pamusoro pechiyero, bhangi rinokubhadharisa mutsauko.
KUSHANDISWA KWEMAHARA KUSHANDURWA KWEMARI (SWAP) kune mamwe masangano epamutemo. Izvo ndezve kuchinja shanduko yemubhadharo yakasarudzika (senge Euribor) kune yakatarwa chiyero. Munguva yega yega, kana iyo yakatarwa mwero iri pamusoro kupfuura iyo inoshanduka mwero, mutengi anobhadhara mutsauko Zvikasadaro, ndiro bhangi rinoibhadhara. Kana zvikaitika kukanzurwa kwekutanga, chigadzirwa chinozobviswa pamusika uye chinogona kutungamira kunzvimbo dzisina kunaka kubhangi kana kumutengi.
Uye zvivharo izvi zvinokupa chii?
Iwe unozvivhara pachako panjodzi mukutarisana nekukwira kwakakwenenzverwa
Iwe unogona kuziva pamberi pemari yemari
Unozvidzivirira kubva pakushanduka kwemusika
ICO mitsara yemari
Paunenge uchisimudzira bhizinesi rako repamhepo, pane zvinhu zvakawanda zvaunofanira kufunga nezvazvo kuti zvishande sezvaunotarisira. Naizvozvo, kutarisana neiyi hombe kudyara, iyo ICO zvikwereti. Mutsara wemari waungasimudzira nawo bhizinesi rako nekudyara mune ese mapurojekiti nyowani nekuvandudza, mukati nekunze kweSpain.
Kune maFreelancers neMakambani ehukuru hwese
Kupa mari mari nekudyiwa zvinodiwa
Chikwereti uye Kubhadhara
Nemashoko akachinjika emari
Yakanakira mamiriro akagadziridzwa kune yako yekudyara chirongwa
Kusvika pamamirioni e12,5 euros pamutengi uye kusvika ku100% yeiyo chirongwa chekudyara
Kiredhiti mu online fomati
Kubatsira kwavo kukuru kumakambani epamhepo kuri muchokwadi chekuti vanopihwa nekukurumidza kupfuura zvechinyakare zvikwereti, pasina basa rekuita chero mapepa, kunyangwe zvavo rubatsiro ruchitsamira pane pre-kupihwa muganho kune mumwe nemumwe mutengi uye, ayo anosarudzika nekuti mari yaakakweretesa yakadzikira pane mamwe maitiro echikwereti, kunyangwe hazvo mamwe masangano ezvemari anoibvumira kukwidza mari iyi kusvika pamakumi matanhatu ezviuru euros.
Ivo vanowanzo shandisa chiyero chemubereko icho chinosiyana pakati pe7% ne10%, uye nezwi rekubhadhara risingambodarika makore mashanu uye, rinofanira kuwedzerwa makomisheni angangoita ekudzidza, kudzikisira zvishoma kana kudzima izvo zvinogona kumiririra pakati pe1% ne3% yekuwedzera pane izvo zvinofanirwa kubhadharwa pachigadzirwa chakabvumidzwa. Kunyangwe hazvo zvave kuve nyore kuzviwana pakati pechipo chiri kuitwa nemasangano emari munguva dzichangopfuura, zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti kubvumirana kwavo hakureve chero mhando yemutero pamitero yezvibereko inoshanda zvine chekuita nezvikwereti zvakanyorerwa kuburikidza kubva kune dzimwe nzira dzechinyakare.
Muchidimbu, izvo zvitoro zvepamhepo kana mabhizinesi ane imwe mari yekupa iyo yakanyanya kufananidzwa nezvinodiwa zvavo chaizvo. Kubva kwaunogona kubhadhara kutenga kutenga michina yemakomputa, kuwana kwazvino uye nyowani ruzivo matekinoroji kana kungoita kusimudzira sevhisi, pakati pezvimwe zvinodiwa zvakanyanya panguva ino chaiyo. Kubudikidza nemaitiro anogona kuitiswa kubva kubhangi rako rekare kana kuburikidza nezvipo uye kukwidziridzwa izvo zvinhu zvemari zvave kuita. Zvekuti avo vane chekuita nemakambani edhijitari vari munzvimbo iri nani yekukwikwidzana nemamwe makambani ane maitiro akafanana. Kuchengetedza kushomeka muaccount account kubva ikozvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Mari yekudzidzira makirasi e-commerce
Mashandisiro ekushandisa kuongororwa kwevatengi kuti uwane zvimwe zvekutengesa muCommerce?